Vaovao - Ankoatry ny vidiny, inona koa ireo antony hafa tokony hodinihina rehefa mividy jammer signal?
Ankoatry ny vidiny, inona koa ireo antony hafa tokony hodinihina rehefa mividy jammer signal?
Ireo lafin-javatra izay tokony hodinihina amin'ny fisafidianana ny fitaovana jammer signal finday:
Ny safidy ny jammer signal finday dia mety aminao. Aza matoky marika lehibe. Tsy ny vidiny ihany koa no antony lehibe. Na mahay ny Jammer signal finday dia azo jerena avy amin'ny fanamarinana isan-karazany an'ny orinasa, fitaovana ampiasaina ary debugging fikirakirana teknolojia. Misy fepetra takiana sasany amin'ny fisafidianana Jammer signal finday. Raha misy fisoratana anarana ara-dalàna an'ny orinasa, na misy mari-pamantarana voasoratra anarana, sns., Azonao atao ny mangataka amin'ny mpanamboatra hanome sary famantarana ny famafana ny telefaona finday, ny sary ao anaty, sns. . Avy amin'ny sary manafoana, hita raha toa ka efa-joro ny faharetan'ny famantaranandro amin'ny telefaona finday ary misy ny korontana, na mahafeno fepetra ny haben'ny debugging matetika, marina ve fa 5 ny vokatra ao amin'ireo vokatra 8 any ivelany, ary izy io dia hita fa mpivarotra tsy mahay mandanjalanja maro eny an-tsena no manintona ny mpanjifa amin'ny vidiny ambany. Amin'izany fomba izany, amin'ny alàlan'ireo fomba etsy ambony, farafaharatsiny azo tsaraina fa tsy vokarina amin'ny orinasa kely sy atrikasa kely izy io, ary azo antoka ny kalitao.
Ahoana ny fampitahana ny fiasa fampiasa parpelling:
Raha mividy fitaovana jammer famantarana finday ianao dia azonao atao ny mampitaha ny masontsivana sy ny asan'ny data debugging raha toa ka azonao atao ny miaro ny fiarovana ny fika amin'ny finday CDMA / GSM / DCS / PHS / 3G / 4G ao anatin'ny tarika matetika. Na ny fantsona tsirairay dia manana famoahana herinaratra ampy, mazava ho azy, arakaraka ny fivoahan'ny fantsona no tsara kokoa ny vokatra miaro. Malalaka izao tontolo izao, ary samy hafa ihany koa ny mpampita serasera isaky ny firenena, ary hafa koa ny fenitry ny tambajotra raisina amin'ny faritra samihafa. Ho an'ny mpanjifa tenany dia tokony ho fantatr'izy ireo ny toerana tokony hampiasantsika ny fitaovana sy ny vokatra ilaintsika hanatrarana, ary hitady mpanamboatra fitaovana matihanina hanolorany fitaovana manohana sahaza anao araka ny toerana fampiasana sy ny firenena fampiasana.
Amin'izao fotoana izao dia mbola misavoritaka ihany ny vidin'ny indostrian'ny fiarovana anatiny. Amin'ny fangalarana ny andry sy fanovana lahatsoratra, fampiasana hosoka, fampihenana ny herinaratra, fampielezan-kevitra diso sns., Ny vidin'ny fitaovana dia resahina fotsiny fa tsy ny lafo kokoa no vao mainka tsara. Aleo misafidy mpanamboatra matihanina afaka manome serivisy maharitra aorian'ny fivarotana. Indraindray dia ara-tsaina ny varotra fa tsy vokatra. Ny sandan'ny tena izy.
Fotoana fandefasana: Oct-17-2020